Manazava ny fomba hanakanana ny firenena sasany amin'ny fidirana amin'ny tranokalanao ny Semalt
Raha manana tranokala na blôginao ianao, dia tokony ho fantatrao tsara fa azo alaina ho an'ny firenena rehetra izany. Ny tranonkala samihafa dia tsy misy ifandraisany amin'ny olona any amin'ny firenena hafa, noho izany dia tsy tokony hanantena ny fifamoivoizana sy ny fitsidihana azy ireo isika. Ohatra, raha manana bokim-bokatra eo an-toerana ianao ary olona avy amin'ny firenenao no misy anao, dia tsy mila mamela ny firenena hafa handany ny fifandimbiasan'ny mpanjifanao ianao.
Misy antony maro samihafa ny fanakanana ny fidirana any amin'ny firenena sasany. Ny antony tsara indrindra dia ny hitadiavan'ity tranonkala ity fotsiny ny olona ao an-toerana ary tsy misy ifandraisany amin'ny vahiny, ka azonao atao ny manajanona ny Google, Bing, ary Yahoo amin'ny fikajiana ny tranonkalanao ho an'ireo firenena ireo. Eto i Ross Barber, Semalt Mpitantana Success Successor, dia niresaka momba ny fomba mahazatra indrindra hanakanana ny firenena:
1. Ny rakitra .htaccess
Raha mpilalao web ianao, dia mety ho fantatrao fa ny famoahana ny .htaccess dia mety hahasoa ny tranokalanao amin'ny fomba maro. Ny hackers legioma sy spammers dia mampiasa mpisolo vava sy toeram-pambolena bot mba hanatanterahana ny asany. Na dia izany aza dia afaka manakana ny adiresy IP tsy mampiahiahy ny mpikarakara tranonkala iray mba tsy hahatonga ireo hackers tsy hanao zavatra maharikoriko an-tserasera. Ny rakitra .htaccess anao dia mety hitombo amin'ny lahatsoratra an'arivony tapitrisa raha manidy ireo firenena tsy fantatra ianao. Noho izany, mila mametraka fehezanteny manokana ao amin'ny rakitra .htaccess ianao, ary ny code dia:
Mandidy Deny, Avelao
ny didy avy amin'ny 1.1.1.1
ny didy avy amin'ny 2.2.2.2
Deny avy 3.3.3.3
2. Ampiasao ny orinasa fampiantranoana amin'ny fanakanana ny serivisy
Azonao ampiasaina ny tolotra fampiantranoana izay manolotra tolotra fanakatonana firenena hafa. GoDaddy no hany tompona fampiantranoana izay manolotra ity serivisy amin'ny vidiny ara-dalàna isam-bolana.
Ny metaly mangatsiaka, antsoina koa hoe VPS, dia ilay milina azonao ampiasaina hanakanana ireo firenena tsy fantatra. Avy amin'ny rindrankajin'ny rindrambaiko ho an'ny tolotra fampiantranoana sy ny tolotra fanaraha-maso, ny metaly mangatsiaka dia mitondra ny zava-drehetra amin'ny tànanao. Ny safidy vy lehibe telo azonao atao dia ny DigitalOcean Droplet, Rackspace, ary InMotionHosting. Google ny anarany ary jereo ny antsipiriany.
4. Ampiasao ireo block block IP IP
Ny orinasa fampiantranoana ampiasainao dia afaka manampy anao hanakana ny adiresy IP amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso. Azonao atao ny mifandray amin'izy ireo mivantana ary angataho izy ireo hametraka tranokala IP ao amin'ny cPanel mba hahafahanao manakana ny IPs amin'ireo firenena izay tsy tianao hahatongavana amin'ny fifamoivoizana.
5. Geoblocking na Geo Restriction
Ny famerana Geo dia mamela antsika hisafidy ireo firenena tiantsika hamerana ny fidirana. Amin'ny alàlan'ny fanoratana ny lisitra na ny lisitr'ireo lisitr'ireo firenena ireo, afaka mora mora ny manolotra ny votoatin'ny tranonkalanao amin'ny Amazon CloudFront. Akamai dia safidy hafa handeha. Raha manana ny CDN mamatsy ny votoatin'ny tranonkalanao ianao, dia tokony hiahiahy momba ny fampiasana tsy misy dikany ny bandwidth. Mitandrema amin'ny tolotra Geoblocking ary ataovy ireo zavatra vita tanteraka.
Raha manana ny Apache modules ianao, dia tsy mila mameno ny rakitra .htaccess amin'ny endritsoratra maro be. MaxMind dia manome antsika ny tahiry maimaim-poana izay azontsika ampiasaina hanakanana ireo IP tsy mety na ahiahiana. Ny GeoLite2 no safidy tsara indrindra handehanana ary tsy misy vidiny Source .